Lolu uhlelo lokusebenza lokususa ingxenye yeShrinkfit. Inqubo yamanje yekhasimende isebenzisa umshini wokucindezela ukuze kufakwe ingxenye efakiwe. Kodwa-ke, lokhu kudinga amandla nesikhathi. Ngokusebenzisa ukushisa, izindlu zinganda ngokwanele ukuvumela ukususwa okulula kwengxenye efakiwe ngamandla amancane. Isidingo sesikhathi sekhasimende ukuqedela Ukususa Ingxenye yeShrinkfit kungakapheli imizuzu eyi-7.
Umshini wokufudumeza we-DW-HF-15kw
Umhlangano ohloliwe ungashiswa ekushiseni okudingekayo ngaphansi kwemizuzu engu-7 usebenzisa uhlelo lokufudumeza lokungeniswa lwe-DW-HF-15kw kanye nekhoyili eyenziwe ngokwezifiso. Isikhathi sokushisa seCustom Coil sasiyimizuzwana eyi-100, Isilinganiso sokushisa sasidinga ukuba sondele ku-400 ° F (204 ° C) ukuze sandise ingxenye ngokwanele ukuze isuswe. Le ngxenye isuswe ngamandla athile okudonsa isetshenziswa kuyo njengoba izindlu zamaphampu zazifika ku-400 ° F (204 ° C).
Lolu hlelo lokusebenza lweShrink Fit lwabuyekezwa futhi ukuthola ukuthi kungasetshenziswa uhlelo lokufudumeza lwaphansi lwamandla aphansi. Kulokhu, imfuneko yekhasimende ibiyimizuzu engu-7, futhi sikuzuzile ukususwa kwengxenye ngemizuzwana eyi-100. Ingabe uhlelo lwamandla aphansi lungasusa le ngxenye ngemali ephansi? Uhlelo lwamandla aphansi lungamukeleka uma umgomo wethu uyingxenye yokufakwa. NgeShrink Fit - Ingxenye yokufakelwa, izinga lokushisa kancane lisengaphumela kwinqubo ephumelelayo. Kodwa-ke, nge-Shrink Fit - Ukususwa Kwengxenye, kubalulekile ukufudumeza ngokushesha. Izinga lokushisa elihamba kancane lingaholela engxenyeni efakiwe ibuye ifudumale, futhi futhi yandise. Ingxenye efakiwe kungenzeka ihlale "inamathele". Ngokushisa ngokushesha, sigwema le nkinga. Ikhasimende kuleli cala linqume ukuthi bobabili basebenzise uhlelo ukufakwa kwengxenye KANYE nokususwa kwengxenye. Uhlelo lwe-4 kW luhamba kahle nge-Shrink Fit - Ingxenye yokufakelwa; nohlelo lwe-7 kW DW-HF-15kw lokufudumeza oluzosetshenziselwa i-Shrink Fit - Ukususwa Kwengxenye
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi ukufudumeza kwangaphakathi kunciphisa ukususwa okufanele, ukufakwa kokunciphisa ukulungiswa, ukungeniswa kuncipha inqubo efanelekayo, shrink fit, nciphisa ukufudumeza okwanele, shrink fitting, shwabanisa ingxenye efanelekayo ukukhishwa Imeyili kwemikhumbi
lokungeniswa kwe-soldering yethusi ishubhu kuma-valve we-zethusi